Inona no haren'i Pauly D? Efa tao amin'ny fandaharana rehetra amin'ny fahitalavitra zava-misy izy - Harena Madiodio
Inona no tombony azon'i Pauly D? Efa tao amin'ny fandaharana rehetra tamin'ny fahitalavitra zava-misy izy
Ho fanampin'ny maha olo-malaza amin'ny fahitalavitra sy ny DJ, i Paul Pauly D DelVecchio dia mpandraharaha mahomby ihany koa izay manana vola 20 tapitrisa dolara. Ho fanampin'ny andraikiny amin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny andiany zava-misy MTV blockbuster Jersey Shore, DJ Pauly D dia nanangana harena manokana ho an'ny tenany ho DJ ofisialin'ny Moon, Rain, ary ny Palms Pool ao amin'ny Palms Casino Resort any Las Vegas, Nevada.
Paul DelVecchio dia teraka tamin'ny 5 Jolay 1980 tao Providence, Rhode Island, ary lehibe tany amin'ny faritra manodidina. Pauly D dia zanak'i Donna DiCarlo sy Paul D. DelVecchio Sr., ary avy amin'ny razambe italiana tanteraka izy (amin'ny teniny manokana). Vanessa no anaran’ny zandriny vavy. Pauly D dia nandeha tany amin'ny Sekoly ambony Johnston, izay nahazoany ny fianarany.
Nanomboka ny asany amin'ny DJing matihanina amin'ny maha-DJ eo an-toerana notarihan'ny moniker Pauly D izy, ary ny iray amin'ireo maherifony matihanina dia ny DJ AM malaza. Pauly D dia nahazo laza be teo amin'ny tanora saika avy hatrany taorian'ny nisehoany ho mpikambana tao amin'ny MTV reality series Jersey Shore tamin'ny 2009.
Nanambara i Pauly D fa tsy noho ny mozikany no nifidianana azy ho amin'ny seho, fa noho ny bika aman'endriny. Nisy talen'ny casting iray nifandray taminy tao amin'ny MySpace ary nangataka ny laharan-telefaonany, ary avy eo dia nalefan'ny ekipa fakan-tsary ho any Rhode Island izy mba haka andro iray teo amin'ny fiainan'ilay mpilalao sarimihetsika.
Enim-bolana mahery kely taorian’izay, dia voatendry tao amin’ilay fandaharana i Pauly D, ary noraisina tamim-pitiavana be. Tamin'ny 2011, nahazo ny Teen Choice Award ho an'ny kintana tena zava-misy Favorite: Lehilahy, izay azony tamin'ny 2010. Pauly D dia voalaza fa nahazo $150,000 isaky ny fizarana Jersey Shore tamin'ny haavon'ny lazan'ny fampisehoana.
Nofantenan'ny MTV ho an'ny fandaharana spinoff, Pauly D no mpiray efitra voalohany amin'ny Jersey Shore nahazo ny spinoff, antsoina hoe The Pauly D Project, tamin'ny 2012. Nalefa tamin'ny 29 martsa 2012 ny fizarana voalohany, ary amin'izao fotoana izao ny andiany. ny vanim-potoana faharoa.
Beat Dat Beat (Tonga ny fotoana) no tokan-tena voalohany an'i Pauly D, izay navoaka tamin'ny 2010. Tamin'ny 2011, nanambara ny fifanarahana amin'ny rakikira telo miaraka amin'ny 50 Cent's G-Unit Records sy G-Note Records izy, izay havoaka mandritra ny telo taona. . 50 Cent taty aoriana dia niaiky fa tanteraka io fifanarahana io.
Ny fanendrena azy ho amin'ny fifaninanana DJ tsara indrindra any Amerika dia nanaraka ny fandreseny tao Jersey Shore tamin'ny taona 2010 sy 2011, izay nanampy azy hampitombo ny fankatoavana azy tamin'izany fotoana izany. Nanambara izy fa hisokatra ho an'i Britney Spears amin'ny Femme Fatale Tour amin'ny 2011, dia nanomboka niara-niasa tamin'i Big Sean izy, izay lasa mpiara-miasa taminy tamin'ny 2012.
Navoaka tamin'ny 15 Janoary 2012 ilay hira Back to Love, ary io no tokana voalohany nataony. Jay Sean, mpihira britanika, dia nandray anjara tamin'ny feon-kira. Tamin'ny 2016, Pauly D dia namoaka ilay hira Fantatrao ve (miaraka amin'i Tdot ILLdude). Silver & Gold, hira fahatelo an'i Pauly D, izay ahitana an'i James Kaye, dia navoaka tamin'ny 5 aprily 2019, ary azo alaina izao. Hatramin’izao ora nanoratana izao dia tsy mbola namoaka rakikira feno izy.
Tamin'ny Aogositra 2012, i Pauly D dia nantsoina ho ambasadaoron'ny media sosialy ho an'ny SummerSlam an'ny Wrestling Inc., hetsika tolona karama isan-taona natao tao amin'ny Madison Square Garden ao New York City.
Miaraka amin'i Pauly D ho an'ny mpilalao E! Ny seho zava-misy ao amin'ny tambajotra Famously Single, izay nanaraka olo-malaza tokan-tena valo rehefa niara-nipetraka tao an-trano izy ireo nandritra ny famahana ny olan'ny fifandraisan'izy ireo, dia lasa anaran-tokantrano i Pauly D.
Tao amin'ny fandaharana no nihaonany ary nanambady an'i Aubrey O'Day taty aoriana; izy ireo dia nandeha kintana tao amin'ny Marriage Bootcamp: Reality Stars 11, izay navoaka voalohany tamin'ny taona 2018.
Miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny Jersey Shore miverina amin'ny vanim-potoana faharoa, Jersey Shore: Vacation Family, napetraka tany Miami tamin'ny taona 2018, dia nanatevin-daharana indray ny Ensemble i DelVecchio. Tany am-piandohan'ity taona ity, Pauly D dia nisongadina tao amin'ny andian-dahatsoratra momba ny fiarahana amin'ny MTV, Double Shot at Love, izay niarahany tamin'i Vinny Guadagnino, mpiara-miasa amin'i Jersey Shore taloha.
Pauly D dia manana mpanaraka marobe amin'ny media sosialy. Tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity dia nanana mpanaraka teo amin'ny efatra tapitrisa teo ho eo tao amin'ny Twitter izy ary mpanaraka maherin'ny efatra tapitrisa tao amin'ny Instagram.
Pauly D sy ny mpihira Aubrey O'Day dia nivady vonjimaika nanomboka tamin'ny 2016 ka hatramin'ny 2018. Niaraka tamin'i Jenni Jwwow Farley, mpilalao sarimihetsika Jersey Shore, tamin'ny 2009 izy, saingy nisaraka ny fifandraisana rehefa afaka roa volana monja.
Tamin'ny Oktobra 2013, Pauly D dia nanambara fa rain'ny tovovavy iray antsoina hoe Amabella Sophia izy. Mipetraka any New Jersey miaraka amin'ny reniny ilay zaza amin'izao fotoana izao, saingy voalaza fa misy fifanolanana eo amin'i Pauly D sy ny renin'ilay zaza.
August Alsina Worth Net 2022: Ny Fifandraisany sy ny Aretinany taloha
The Boys Season 3: Daty famotsorana sy fanavaozana!
ahoana ny fomba hitsitsiana netflix ivelan'ny Internet amin'ny mac
jereo an-tserasera maimaim-poana tsy misy fisintomana
ny fomba fisoratana anarana ho an'ny praiministra
tranokala fandefasana sarimihetsika toy ny putlocker
mpanova haino aman-jery youtube ho mp3
maninona no tsy miasa amin'ny mac-ko ny netflix